Ijoollee dubara Hindii hin barbaadamne mil. 21 - BBC News Afaan Oromoo
Maatiiwwan biyya Hindii keessatti argaman ijoollee dubaraa caala ijoollee dhiiraa argachuuf fedhii olaanaa qabaniin kan ka'ee ijoolleen dubaraa hinbarbaadamne miliyoona 21 ta'an biyyattii keessa jiraachu gabaasni motummaa tokkoo beeksise.
Gabaasni ministeerri maallaqa Hindii baasee akka eereetti, maatii hedduun ijoollee dhiiraa ragachuuf jecha dahuu itti fufuu.
Oggeessi gabaasicha qopheesse akka jedhettis, filannoon kunis gocha filannoo saalaatiif jecha ulfa baasuu irra kan wayyu yoo ta'eelleen xiyyeefannaa ijoollee dubaraatiif kennemu qabu sadarkaa olaanaan kan hirisu ta'u akkeekachisuu.
Gama filannoo ijoollee dhiiraatiin jiruu ilaalunis, 'dhimma maatiin Hidii irratti mari'achuu qabaniidha' jedhu oggeessi kun.
Qopheessitoonni gabaasischa akka irra gahanittis, maatiin akka daa'imti dubaraa ulfa'amee erga hubataniin booda ulficha baasuuf yaalii taasisaniin dubbartoonni biyyatti miliyoona 63 ta'an akka miidhaman taasiseera.
Goodayyaa suuraa Dirqiin gudeeduun fi tuttuqqaan saalaa lammilee Indiyaa oriisiseera
Kana malees kunuunsi gaariin shamarran irra ijoollee dhiiraatiif taasifama.
Hindii keessatti saalaa daa'ima garaa keessa jiruu hubachuuf qorannoon taasifamu seeraan ala ta'ulleen, qoarnnichi waan raawwatamuuf ulfa baasuuf carraa umee jira.
Dhimmoota maatiin akka irra caalaa ijoollee dhiiraa akka barbaadan taasisan keessaayis, qabeenyaan maatiin waan ilma dhiiraatiif dabarfamuufiidha. Tibba gaa'ilaas maatiin intalaa akka harka fuudhaaf kanfala waan eegamaniifi dubartoonnis erga eerumaniif gara maatii gurbaatti waan galaniif akka ta'e himama.
Gaaxezaan biyyattii keessatti argamu tokkoos ilaalcha cimaa ijoollee dhiiraa ragachuuf hawaasicha keessa jiru kanaan mala dhiira argachuu saayinsiin hindaramne jehuun barreessee jira.
Malawwan gaazexichi eeree keessaa wayita hiriibaa gara liixaatti naannawuun rafuu fi guyyoota torbanii keessaa muraa keessattii quunnamtii saalaa raawwachuun ijoollee dhiiraa ragachuuf ni gargaara kan jedhan keessatti argamu.
Naannawwan Hindii filannoon ijoollee dhiiraa keessatti calaqisu keessaa Punjaabiifi Haariyaanaan dursaan kan eeraman yoo ta'u, bulchiinsi Megaalaayaan isaan sadarkaa gadaanaa irratti argaman keessaayi.
Qorannoon dinagdee Bulchiinsoota Punjaabiifi Haariyaanaatti taasifameen tokkoon tokkoo ijoollee shamarranii umuriin isaanii waggaa torbaan gadii ijoollee dhiiraa 1200 ttu argamis jedheera.
Karaa gara biraatiin ammoo Magaalaa guddoo Hindii New Delhiitti daa'imni ji'a saddeetii ilma wasiila isheetiin guuu dhagahame.
Daa'imni kun Sanbata darbe gara hospitaala naannichatti argamuutti kan geeffamte yommuu ta'u haalli fayyaa ishee yaaddessaadha jedhameera.
Hojjetaa hojii guyyaa, dargaggeessa waggaa 28 gocha kana raawwachuun shakkame to'annoo poolisiin jala ooleera.
Komishinarri dhimma dubartootaa Delhii, Siwaati Maliwaal, Hoospitaalatti argamuun daa'ima kana erga ilaalanii booda miidhamni irra gahe 'akkaan sodachisaadha' jedhaniiru.
Gochi kun kan raawwate Sanbata darbe ta'us, gurra miidiyaalee fi hawaasa bal'aa kan gahe Wiixate miidiyaan naannoo tokko erga gabaasee booda.
Aadde Maliwaal ergaa twiitara irratti maxxansaniin daa'imni kun waldhaansa baqaqsani yaalu sa'aa sadii gochuu qabdi jedhaniiru. Gocha kanaan hedduu gadduus twiitara irratti maxxansaniiru.
''Maal haagoonu? Magaala Delhii keessatti daa'imni ji'a 8 gara jabinaan erga gudeedamtee Delhiin akkamiin rafti? baayyeedhuma miiraa gadduu dhabaa jirra moo, kun hiree keenya jennee itti dhiifne laata?'' jechuunis gaafataniiru aadde Maliiwal.
Ergaa Ministeera Muummee biyyyattii Naarindiraa Moodiif akka gahu maxxansaniinis ''seerri ciimaa fi humna poolisii baayyee'' dubartoota biyyatti balaarraa ittisu barbaanna jedhaniiru.
Dhimmoonni xuxxuqqaa saalaa erga bara 2012 gareen gudeeddaan raawwatame lubbuu barattuu waggaa 23 magaala New Delhii galaafatee booda dabaleera.
Yakki kun mormii guyyoota hedduuf ture kaasuun, mootummaan seera cimaa gudeddaa balaaleffatu fi yakkamtoota du'aan adabu akka baasuu dirqisiiseera.
Haata'u malee dirqiin gudeeduun ammas biyyatti keessatti itti fufeera.